IFLIX APK ကို free download | IFLIX 2.32.0-6366 APK ကို | WikiWon
IFLIX APK ကို free download | IFLIX 2.32.0-6366 APK ကို
mujeer စက်တင်ဘာလ 19, 20170မှတ်ချက်များ
1 Iflix APK ကို Android အတွက် Download:
1.1.3 ရုံ 30 မိနစ်အကြာကငါပေးပြီတော့မယ်လို့5ကြယ်များ.
1.1.4 ငါ၏အ iflix တော့ဘူးအလုပ်လုပ်သည်မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်?
1.1.5 ငါပင်ကသင့်ရဲ့ connection ကိုပြောပါတယ်ရုပ်ရှင်မကြည့်နိုင်ပါတယ် ...
1.1.6 iflix ကို install နောက်မှငါစောင့်ကြည့်
1.1.8 ဒါဟာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့ကဖွင့်ခြင်းနှင့် app ကိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူး.
1.1.9 IFLIX အင်္ဂါရပ်များ:
Iflix APK ကို Download လုပ်ပါ ဘို့ အန်းဒရွိုက်:
Iflix APK ကို Android အတွက် Download (iflix.apk). iflix တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အခမဲ့ ကြောက်မက်ဘွယ်သော Entertainment က app ကို.
Iflix ထွန်းသစ်စစျေးကွက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေတဲ့ကြေးပေးသွင်းဗီဒီယို On-demand ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်. အာရှ၎င်း၏ဒေသဆိုင်ရာဌာနချုပ်ကွာလာလမ်ပူအခြေစိုက်, မလေးရှား.
Tonton ကူဝိတ် clients များရ iflix ရုပ်ရှင်ကူဝိတ်တီဗီ Big Bang ဒဏ္ဍာရီပထမဦးစွာအချိန်ခိုးရုပ်ရှင်တွေ 30 အခမဲ့အစမ်းအတူတကွဘာရိန်းရုပ်ရှင်ရုံကိုကြည့်ရက်ပေါင်း.
ဆက်ဖတ်ရန်: IS PAYPAL ACCOUNT AVAILABLE IN PAKISTAN???
Unlimited ဖျော်ဖြေရေး? သင်ကတယ်! ဆုရပြပွဲတစ်ခုအကြီးအကျယ်စာကြည့်တိုက်ကနေရှေးခယျြပါ & ရုပ်ရှင်တွေ. stream သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ် & Watch Offline popular TV series, အပြည့်အဝ box ကိုအစုံ, iflix သီးသန့်, 24နာရီအမြန်ဖြစ်စဉ်များ, Blockbuster ရုပ်ရှင်တွေ, မလေးအကြိုက်ဆုံး.
iflix ရုပ်ရှင်တွေခိုးကူဝိတ်တီဗီတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက app ကိုမဟုတျပါဘူး. This app made from fan lover of movies and series and also the TV show. ဒါကြောင့်, ဒီ app ထဲမှာသငျသညျအခမဲ့ iflix သုံးပြီးရန်အကြံပေးချက်များ၏တွေအများကြီးနှင့်မည်သို့ရလိမ့်မယ်!
ဒီ app ကိုအလိုအလျောက်ငါ့ကိုထွက် logged နှင့်အခါတိုင်းငါအတွက်လက်မှတ်ထိုးငါတို့သည်အချို့သောပြဿနာတယ်ပြောပါတယ်. ငါကဖြုတ်နဲ့ပြန် installed, ဒါကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏နိုင်ငံတွင်မရရှိနိုင် r ပြောပါတယ်. ဤပြဿနာကိုမှမဆိုဖြေရှင်းချက်?
ဆက်ဖတ်ရန်: 7+ အနားယူပြီးတော့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကျန်းမာရေးသည်အိပ်စက်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ
မှန်ကန်သော pin ကိုငါဖွင့်နိုင်အောင်ငါသက်တမ်းတိုးဖို့နိုင်ပါတယ်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းအချို့ amts အတွက်ထားပေမယ်တစ်ခုလုံးကိုဆရှိနေသော်လည်းငါ့ကိုခွင့်မပြုရဲ့. ကိုယ် subscribe ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျွန်မပေးဆောင်ပေမယ်ဝင်ရောက်ဖို့မတတျနိုငျအပေါင်းတို့နှင့်အားထုတ်မှုရှိနေသော်လည်း, အဘယ်သူမျှမဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့. ထိုအခါငါကတခြားအီးမေးလ်ကိုအသုံးပြုယခုဈက hard subscribe ဖို့ရှာဖွေတာငါ. ဒါဟာတော်တော်လေးဦးသိကြကုန်ခမ်းတော့မှာရဲ့ ...
Unlimited ဖျော်ဖြေရေး? သင်ကတယ်! ဆုချီးမြှင့်တဲ့ဧရာမစာကြည့်တိုက်ကနေရှေးခယျြပါ-ရှိုးပွဲအနိုင်ရ & ရုပ်ရှင်တွေ. stream သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ် & စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကိုအော့ဖ်လိုင်း ...
ရုံ 30 minutes ago I would’ve given it5ကြယ်များ.
ဘာပဲအကြောင်းပြချက်များအတွက် app ကို haywire သွားပြီ, ကျွန်မအဖြစ်ကောင်းစွာအွန်လိုင်း check လုပ်ထားကြောင့်လည်းထွက် bugged ရဲ့. ငါအခိုငျအမာကိုငါ့အကောင့်ထဲက logged ခဲ့သည်, ယခုအဲဒါကိုပဲမရရှိနိုင်ခဲ့လျှင်ငါ့တိုင်းပြည်အတွက်ရရှိနိုင်မယ့်ပြောပါတယ် 10 မိနစ်အကြာက. ငါတကယ်ဒီ app ကအရမ်းစိတ်ပျက်စရာကြိုက်တယ်ကတည်းက. ငါပြန်ကြားချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းတယ်ဒါကြောင့်ငါ Iflix messenger ကိုကျော်နှင့်လည်းသူတို့ရဲ့အကူအညီ option ကိုတဆင့်အကူအညီတောင်းတော့.
ငါ၏အ iflix တော့ဘူးအလုပ်လုပ်သည်မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်?
It supposes to end in October since I redeem free for digi. ဒါဟာထပ်ကြိုးစားကြည့်အပေါ်စောင့်ရှောက်, ထပ်ကြိုးစားပါ. ငါက Facebook နှင့် e-mail ကိုကနေတဆင့်နှစ်ဦးစလုံးမှတ်တမ်းများအတွက်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်သေးသေးအလုပ်မလုပ်. Pls, တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဤပြဿနာကိုဖြေရှင်း. ငါတကယ်ကဖြေရှင်းဖို့မျှော်လင့်.
ငါပင်ကသင့်ရဲ့ connection ကိုပြောပါတယ်ရုပ်ရှင်မကြည့်နိုင်ပါတယ် ...
မကောင်းမသင့်ဖြစ်၏ဒါပေမယ့်အပေါငျးတို့သညျအခွား app များကိုချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်နေနေကြတယ်. ပြောကိုမုန်းပေမယ့် fixed မပါလျှင်ထို့နောက်ငါဖြစ်ကောင်းက uninstall ပါလိမ့်မယ်.
- Wikiwon (@ Wikiwon2) စက်တင်ဘာလ 19, 2017
iflix ကို install နောက်မှငါစောင့်ကြည့်
ဆက်ဖတ်ရန်:3ANDROID စာရင်းဘက်ထရီချွေတာအက်ပ်များ
ငါဒီ app ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့နောက်တဖန်ဖွင့်သည့်အခါတစ်ဦးကမြေတပြင်လုံးပေါ်မှာရုပ်ရှင်ပေမယ့်လာမယ့်နေ့ကအလုပ်မလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ငါသည်ဤ app ကိုဖြစ်နိုင်မယ့်ပုံကိုကျနော်တို့နိုင်ငံမှာအလုပ်မလုပ်သောအကြောင်းကြားစာအရ? ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် ကျေးဇူးပြု. ...
ပထမတော့ကိုယ့်အွန်လိုင်းစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်တကွသင်ထောက်ပံ့ပေးပေမယ့်အခုကိုအသုံးပြုပြီးကိုယ့်ကြောင့်ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်-install အခါပထမဦးဆုံးယခုပြီးတော့သူ့ဟာသူငါ့ကိုထွက် logged နှင့်သကဲ့သို့စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်အမှုအရာကို download လုပ်ပါရန်သင့်အားခွင့်ပြုအဖြစ်ကအကောင်းဆုံး app ခဲ့တူသောထင် သငျသညျဈမတိုင်မီအသုံးပြုနိုင်နိုင်ခဲ့သည်ဘယ်လိုငါ၏အနိုင်ငံတွင်မရရှိနိုင်ခဲ့ကြပါလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလေးအနက်ထားကဲ့သို့သင်တို့နိုင်ငံတွင်မရရှိနိုင်ကြသည်? ဒါကြောင့်ကို update မနေပါနဲ့.
ဆက်ဖတ်ရန်: Blue Whale Challenge APK Latest
ဒါဟာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့ကဖွင့်ခြင်းနှင့် app ကိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူး.
ဒါဟာတင်တတ်. ကျနော့်အမြင်အတွက်ပိုကောင်းတဲ့အလားအလာရှိတယ်သောဤ App ကအလွန်စိတ်ပျက်. ငါနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသင်း asap app ကိုပြုပြင်တာတွေအပေါ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ဤကြာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်.
သငျသညျဒေါင်းလုပ်ပင်နိုင်ပါတယ် & စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကိုအော့ဖ်လိုင်း.
ကြော်ငြာမပါ, အဘယ်သူမျှမစာချုပ်များ, အွန်လိုင်းအချိန်မရွေး cancel.
အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ရန်ဒီနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ! နှင့်ဖျော်ဖြေမှု App ကိုခံစားကြည့်ပါ ...
Android App များ	iflix 1.1.10 apk, စမတ်တီဗီများအတွက် iflix apk, iflix apk version အဟောင်းများ, android ဖုန်းများအတွက် iflix app ကို download,, PC အတွက် iflix download,, Android TV များအတွက် iflix, iflix အခမဲ့အစမ်း, iflix Video Downloader	bookmark
ယခင်အပိုဒ် အခမဲ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာမြှင့်တင်ရန်ပုံ???
next ကိုပုဒ်မ ထိပ်တန်း 10 ၏လူကြိုက်အများဆုံးအခမဲ့ WordPress ကိုသတင်းလွှာ Plugins တွေကိုအီးမေးလ် 2017 (Code ကို)